Kpido: web 3.0 | Martech Zone
Kpido: web 3.0
O yikarịrị ka ihe mmịfe a ọ na-eweta ịsụ ude na ịsụ ude mgbe m gosiri ya n'ihu ndị ọrụ ibe m. Aghaghị m igosipụta ya. Enweela uche dị iche iche na webụ n'oge gara aga. Anyị nwere Weebụ 0.0 nke bụ ederede na bọọdụ mkpọsa. Cheta ụbọchị ndị ahụ? Na-eche ka onyonyo ahụ kwụzie ahịrị site na iji otu 1200 baud modem gị! (Ee, ama m na m emeela agadi!) Web History Web 1.0 ghọrọ n'ezie